ကုလသမဂ္ဂ အမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ်နေရာ အစားထိုးဖို့ စစ်ကောင်စီကြိုးပမ်း — မြန်မာဌာန
ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာ မြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ် သံအမတ်ကြီး ဦးကျော်မိုးထွန်း ကို တွေ့ရစဉ်
အမေရိကန်ပြည်ထောင်စု နယူးယောက်မြို့မှာရှိတဲ့ ကုလသမဂ္ဂဆိုင်ရာ မြန်မာအမြဲတမ်း ကိုယ်စားလှယ် အဖွဲ့ရုံးရဲ့ ဒုတိယအမြဲတမ်း ကိုယ်စားလှယ် ဦးတင်မောင်နိုင်ကို ယာယီသံရုံးတာဝန်ခံအဖြစ် စစ်ကောင်စီ နိုင်ငံခြားရေးဌာနက ကြေညာပြီး ကုလသမဂ္ဂမှာ အစားထိုး သံအမတ်ခန့်အပ်လွှာ တင်သွင်းလိုက်ပါတယ်။
ဒီစာကို ရန်ကုန်မြို့က ကုလသမဂ္ဂ ဌာ‌‌နေညှိနှိုင်းရေးမှူးရုံးကတဆင့် မတ်လ ၂ ရက် မနေ့ကရက်စွဲနဲ့ အရေးပေါ် တင်သွင်းလိုက်တာပါ။
မြန်မာအမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ် သံအမတ်ကြီး ဦးကျော်မိုးထွန်းက သူဟာ NLD အစိုးရနဲ့ လွှတ်တော်ကိုယ်စား ပြုကော်မတီ (CRPH) ကို ကိုယ်စားပြုကြောင်း ကုလသမဂ္ဂမှာ တရားဝင် ပြောဆိုလိုက်ပြီးနောက် အာဏာ သိမ်းစစ်ကောင်စီက ဦးကျော်မိုးထွန်းကို ဝန်ထမ်းအဖြစ်က ထုတ်ပယ်ပြီး ဒုတိယ အမြဲတမ်းကိုယ်စားလှယ် ဦးတင်မောင်နိုင်ကို အစားထိုးဖို့ ကြိုးစားနေတာပါ။
သံအမတ်ကြီး ဦးကျော်မိုးထွန်းဟာ… မိမိအနေနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ တရားဝင် သံအမတ်ကြီး အဖြစ် ဆက်လက်တည်ရှိနေကြောင်း ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေညီလာခံ ဥက္ကဋ္ဌကို မတ်လ ၁ ရက် တနင်္လာနေ့က စာပေးပို့ထားပါတယ်။
သံအမတ်ကြီး ဦးကျော်မိုးထွန်းနဲ့ သူ့ရဲ့လက်ထောက် ဦးတင်မောင်နိုင်တို့ နှစ်ဦးစလုံးဟာ ကုလသမဂ္ဂ အစည်း အဝေးတွေကို တက်ရောက်ခွင့်ရှိသူတွေ ဖြစ်တဲ့အတွက် ဘယ်သူက မြန်မာနိုင်ငံကို ကိုယ်စားပြုတယ်ဆိုတဲ့ အပေါ် ကုလသမဂ္ဂ အထွေထွေညီလာခံရဲ့ Credentials Committee က ဆုံးဖြတ်ပေးရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ဒါဟာ မတွေ့ရတာကြာပြီဖြစ်တဲ့ ထူးခြားတဲ့အခြေအနေ ဖြစ်တယ်လို့ ကုလသမဂ္ဂ ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ် စတီဖန် ဒူဂျာရစ်က သတင်းထောက်တွေကို ပြောပါတယ်။ ကုလသမဂ္ဂအနေနဲ့ ဒီကိစ္စရပ်တွေကို အမြန်ဆုံးဖြေရှင်းဖို့ ကြိုးစားနေတယ်လို့လည်း ပြောပါတယ်။
ဒီလုပ်ငန်းစဉ်ဟာ လက်ရှိပြဿနာကို ပိုပြီး ကျယ်ပြန့်လာစေနိုင်သလို အချိန်လည်း ကြာမြင့်သွားနိုင် ပါတယ်။ကုလသမဂ္ဂ အတွင်းရေးမှူးချုပ် အန်တိုနီယိုဂူတာရက်စ်ကတော့ မြန်မာနိုင်ငံ ဒီမိုကရေစီစနစ် ပြန်လည်ရောက်ရှိအောင် လုံခြုံရေးကောင်စီကတဆင့် လုပ်ဆောင်စေချင်တယ်လို့ ကုလသမဂ္ဂ ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ်က ပြောပါတယ်။
လာမယ့် သောကြာနေ့မှာ မြန်မာ့အရေး လုံခြုံရေးကောင်စီ အစည်းအဝေး ပြုလုပ်ဖို့ ဗြိတိန်နိုင်ငံက အဆိုပြုထားတယ်လို့ CNN သတင်းတစ်ပုဒ်မှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။
အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ပြောခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ် Ned Price ကတော့… ဦးကျော်မိုးထွန်းဟာ မြန်မာ အမြဲတမ်း ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် ဆက်ရှိနေကြောင်း၊ မိမိတို့အနေနဲ့ မြန်မာပြည်သူတွေနဲ့ ဆက်လက်ရပ်တည် ပြီး၊ ဒီမိုကရေစီ အရပ်သားအစိုးရ အာဏာပြန်လည်ရရှိအောင် ဆက်လက်ထောက်ခံသွားမယ့်အကြောင်း ဝါရှင်တန်ဒီစီမှာ မနေ့က ပြုလုပ်တဲ့ နေ့စဉ်သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ ပြောဆိုထားပါတယ်။
I think USA can reject the U Tin Maung Naing . U Kyaw Moe Htun is legitimate. And also , ban the ligitamacy of the military coup regime. CRPH need the budget for the
Legitimate, this is not the corruption. This is legal political process of the people of Myanmar. The coup junta doesn't deserve the ligitamacy to kill unarmed civilians with the money belong to the people of Myanmar.